Ku Dadaalida Dhanka Cadaalada Jinsiga Arrinta #9 - Qabashada Socdaalka, Sii Wadista Shaqada - Tucson Pima Wadashaqeynta si loo soo afjaro Hoyla'aanta
by	Jason Thorpe	/ Monday, February 28 2022	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga
Arrinta #9- Qabashada Socdaalka iyo Sii wadida Shaqada
TPCH ayaa la sii daayay Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga: Wacyigelinta Ficil ee Ururada Bulshada Ku Salaysan Degmada Pima, wadashaqeyn la leh Jaamacadda Arizona Southwest Institute for Research on Women bisha Noofambar 2021. Markaan bilaabeyno 2022, waxaan ugu baaqaynaa ururada bulshada iyo la-hawlgalayaashayada guryeynta inay sii qoto dheereeyaan go'aankeena la wadaago ee horumarinta sinnaanta jinsiyadda. Taxanahan iimaylka ah waxa uu bixinayaa soo koobida fikradaha muhiimka ah iyo xeeladaha lagaga hadlay Wicitaanka Talaabada waxana aan ka buuxay agab iyo agab waxtar leh si aan u caawiyo ururada bulshada marka ay ku dadaalaan cadaalada jinsiyadeed.
Arrintaan, waxaan ku soo bandhigaynaa ficillada ugu dambeeya ee muhiimka ah ee lagu qeexay Wicitaanka Ficil: Qabashada Socdaalka iyo Sii wadida Shaqada. Hawsha horumarinta cadaalada jinsiyadeed waa mid socota, waxaana naloogu baaqayaa in aan samayno wakhti dheer haddii miraha sinaanta ee aan ku beeranayno ururadayada iyo bulshadayada dhexdooda.
Talaabada 7: Qabsoon Safarka oo Sii wad Shaqada Shaqada caddaaladda jinsiyadeed ma fududa ama ma fududa. Shaqada dhabta ah waxaa ka mid ah in lala yeesho wada sheekaysi adag, la kulma shucuur aad u daran iyo, suurtagal ahaan, luminta asxaabta.
Dadku waxay haysteen nidaamkooda caqiidada shakhsi ahaaneed muddo dheer ka hor intaan la waydiisan inay qabtaan shaqadan urur. Mararka qaarkood, waxaa la dareemi karaa in shaqada ay istaagtay oo aysan jirin meel loo socdo. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa qayb ka mid ah shaqada iyo inta badan tallaabo jidka loo maro.
Nasiib darro, ma jiro dhammaadka dadaalka caddaaladda jinsiyadeed. Ma fududa sida qorshe abuurista iyo dhamaystirka qorshaha.
Caddaaladda jinsiyadeed waxay u baahan tahay ballan-qaad muddo dheer ah iyo dadka ay ka go'an tahay inay ilaashadaan muraayadda caddaaladda jinsiyadda ee dhammaan dhinacyada ururka.
Nasiib wanaag, u heellanaanta caddaaladda jinsiyadeed waxay ka dhigaysaa shaqada mid dabiici ah oo sahlan in la fuliyo.
Ugu dambayntii, rajada laga qabo ururo cadaalad ku dhisan ayaa aad uga miisaan culus caqabadaha lama huraanka ah.
Daawo "Isbeddel Waara Oo Ku Wajahan Sinnaanta Jinsiga: Ka Danbaysa Buugga Robert Livingston", qoraaga Wadahadalka: Sida Raadinta iyo Ka Hadalka Runta Ku Saabsan Cunsuriyadda ay si dhab ah u beddeli karto Shakhsiyaadka iyo Hay'adaha.
Xeeladaha lagu taliyay
Ilaali kooxda loo abuuray inay diirada saaraan cadaalada jinsiyadeed.
In kastoo xubnaha laga yaabo inay ka soo baxaan kooxda, shaqadu waa weligeed, ma aha hindise hal mar ah.
Sii fursado joogto ah daneeyayaasha si ay u wadaagaan macluumaadka, aragtiyaha, soo jeedinta, iyo warbixinnada eexda jinsiyadeed.
La wadaag rajada urureed ee caddaaladda jinsiyadda inta lagu jiro habka waraysiga ee shaqaaleysiinta cusub.
Hubi in tababbarka caddaaladda jinsiyadda iyo shaqada gudaha ay qayb ka tahay hannaanka fuulista.
Abuur xeelado cusub (naadi buug, firfircooni, waxqabadyo dhaqameed) si ay dadku ugu sii wadaan ka qayb qaadashada shaqada caddaaladda jinsiyadda si aan rasmi ahayn.
Dib u eeg xogta oo tixgeli walxaha kale si aad u falanqeyso.
U dabbaaldeg guulaha ururka iyo shakhsi ahaaneed
Bayaanka La Xisaabtanka: Waa sidee Xisaabtanku aniga iyo Guud ahaan Dadka Cadaanka ah?
Xoojinta Barashada-waqtiga-dhabta ah iyo Saxitaanka Koorsada
Dan Wilson iyo Marilyn Darling, Ontario Trillium Foundation, Saxiixa Cilmi-baarista & La-talinta, Deeq-bixiyayaasha Ururada Waxtarka leh
Shan Tilaabo Oo Loo Qaaday La Xisaabtanka Ka-hortagga Cunsuriyada
Mavis Joy Manaloto iyo al, StageSource
Sideen Ku Abuuri Karnaa Rajo Macquul Ah Guusha Xeeladaha Kooxda Iyadoo Wali Lala Xisaabtamayo?
Xarunta Qiimaynta iyo Horumarinta Siyaasadda
Sideen uga dhigi karnaa Qiimaynta iyo Dabagalka Xogta Joogtada ah?
Sideen u Isticmaali karnaa Natiijooyinka Qiimaynta si aan u Milicsano oo aan u Hagagno Shaqadeena?
Sidee YWCA Boston u Isticmaalaysaa Xogta Sinaanta Jinsiga
Kemarah Sika iyo Dr. Sarah Faude, Borealis Philanthropy
Waa qadarin, ixtiraam iyo qaddarin ugu sarraysa in aanu uga mahad-naqno qorayaasha kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka geysteen baaqa ficilka ah. Marka lagu daro dadaalkooda maalinlaha ah ee hagar la'aanta ah iyo sida hagar la'aanta ah ee ay ugu heelan yihiin in ay helaan cadaalada isir ee bulshadeena dhexdeeda, waxa ay khibradooda iyo dareenkooda ku siiyeen rajada rajada leh ee ah in ururada maxaliga ahi ay diyaar u yihiin in ay si wanaagsan ugu adeegaan macaamiishooda oo ay si wanagsan u taageeraan shaqaalahooda. Mid kasta oo idinka mid ah wuxuu ka dhigaa bulshadeena meel cadaalad ah.
SOO DEJI BAAQA DHAMAYSTIRAN
DAAWO HORDHAC MUUQAALKA OO KU SAABSAN BAAQA FICILKA